Taylor Swift ရဲ့ Reputation Tour မှာအဖွင့်သီချင်းဆိုကြမယ့် Camila နဲ့ Charli XCX
On March 5, 2018 By fairy
အားလုံးရဲ့ အသည်းကျော် Taytay လေးက 5.5.2018 မှာစတင်မယ့် Reputation Stadium Tour မှာ အဖွင့်သီချင်းဆိုပေးမယ့် သူ့ရဲ့ squad ၂ယောက်ကို ကြေညာလိုက်ပြီ။ အဲ့ဒီ ၂ယောက်ကတော့ ထွန်းတောက်နေတဲ့ကြယ်ပွင့်လေး Camila နဲ့ Boom Clap သီချင်းပိုင်ရှင် Charli XCX တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သောကြာနေ့ (၂.၃.၂၀၁၈)မှာပဲ Taylor ကသူ့ရဲ့ social media တွေကနေတဆင့် video လေးတစ်ခုတင်ပြီး announce လုပ်ခဲ့တာပါ။ အဲ့ video လေးမှာ Taytay အနေနဲ့ ပရိသတ်တွေကို ဒီသတင်းပြောပြရတာ အရမ်းပျော်ရကြောင်း၊ သူတို့၂ယောက်နဲ့တွေ့ရဖို့လဲမစောင့်နိုင်တော့ရုံသာမက ဒီ tour အတွက်ရော အားလုံးအားလုံးအတွက် အရမ်းကို စိတ်လှုပ်ရှားနေရပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေပြောထားခဲ့တာပါ။
Taytay တစ်ယောက်ပဲ စိတ်လှုပ်ရှားနေရတာမဟုတ်ဘဲ သူ့ squad ၂ယောက်ကလဲ ဒီလိုမျိုး အဖွင့်သီချင်းဆိုရတဲ့အတွက် သူတို့ဘယ်လိုတွေပျော်ရွှင်ရပါတယ်ဆိုတာတွေကို သူတို့ရဲ့ social media တွေမှာ post လေးတွေတင်ပြီး ပြန်ပြောထားခဲ့တာကို အောက်မှာကြည့်လိုက်ကြပါဦး။
can i officially be the bad influence on the #ReputationStadiumTour ??? (just kidding….. or am i??) ?⚡
woke up this morning and was like, oh shit, it’s notadream, i really am going on tour with @taylorswift13 and @Camila_Cabello and it’s going to beatotally wild/crazy/girl power situation. HELL YEAH ?⚡
Charli XCX ကတော့ သူ့အနေနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားရပြီးTaytay ကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ရေးထားခဲ့ပါတယ်။ Charli XCX ဆိုတာ နာမည်သာမရင်းနှီးမယ် သူ့ရဲ့ Hit ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Boom Clap သီချင်းဆိုရင်တော့ အားလုံးသိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ Boom Clap သီချင်းအပြင် Boys, After The Afterparty နဲ့ Break the Rules သီချင်းတွေနဲ့ပေါက်ခဲ့တဲ့ အဆိုတော်/တေးရေးတစ်ယောက်ပါ။ အမယ် Charli XCX က post ကိုမှ တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးနော် ၂ရက်တည်းမှာ post သုံးခုတောင်တပြိုင်နက်တင်ထားခဲ့တာ။ ဘယ်လောက်တောင်ပျော်နေလဲဆိုတာကိုမေး ? ? post တွေကို ၂ရက်ခွဲတင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ မသေချာလို့ပြန်အိပ်ပြီး တကယ်လား အိပ်မက်လား စမ်းကြည့်နေမှာ 😛
အဲ့တာနဲ့ နောက်နေ့ နိုးလာတော့ သေချာသွားလို့ စွန်းပျော်သွားတယ်တဲ့??
on every level, this isadream come true asafan, i’m going to be singing every song at the top of my lungs asafriend, it’saGIANT SLEEPOVER as the girl who hadaTaylor swift poster in her room when she was 14 and wanted SO BADLY to go to the speak now tour (distinctly remember my friends going to school the next day raving about it and me like ????), ITS A DREAM as the girl who would sing Hey Stephen thinking of the boy in class who didn’t know my name LMAO, it’s. A. DREAM also, @charli_xcx WHO I ADORE, WHAT?!!!!!! this is going to be so much fun!!!! thank you @taylorswift for having me from the bottom of my heart, i love you so much !!!!!!!!
အလဲ့ Camila လေးကတော့ drama လေးနဲ့ဗျ!
အသက် ၁၄နှစ်အရွယ်ကတည်းကရူးသွပ်ခဲ့ရတဲ့ အဆိုတော်နဲ့အတူ ဖျော်ဖြေခွင့်ရတယ်ဆိုတာဟာ အိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာတာပါပဲတဲ့…… ငယ်ငယ်တုန်းက ကိုယ့်နာမည်ကိုတောင်သူမသိခဲ့တဲ့အချိန်တွေကတည်းက သူ့သီချင်းတွေကို ကျောင်းခန်းထဲမှာဆိုခဲ့ရတာတွေ၊ သူ့ show ပွဲကိုမသွားနိုင်ခဲ့လို့ သွားခဲ့တဲ့သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ ဝမ်းနည်းခဲ့ရတာတွေ…ကိုယ့်အခန်းလေးထဲမှာ သူ့ပုံပိုစတာကပ်ထားပြီး ရူးသွပ်ခဲ့ရတာတွေ…..အိပ်မက်တွေလိုပါပဲတဲ့……..
Camila လေးကTaytay တစ်ယောက်တည်းသာမက သူအသည်းစွဲဖြစ်တဲ့ Charli XCX နဲ့ပါ တွဲလုပ်ရမယ်ဆိုတော့ အရမ်းကိုပျော်စရာကောင်းမှာပဲလို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။Taytay လေးကိုလည်း ရင်ထဲအသည်းထဲကလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ပြီး ရမ်းချစ်ပါတယ်လို့လဲ ပြောထားပါသေးတယ်။ ကဲ သူများတွေများ ကံတွေကောင်းချက်နော်…..
Taytay ပရိသတ်တွေကတော့ Camila နဲ့ Charli XCX က အရမ်းကံကောင်းတဲ့သူတွေပါ…. ဘာလို့လဲဆိုတော့ Taylor Swift ရဲ့ အရင် tour တွေမှာ အဖွင့်သီချင်းဆိုခဲ့ကြသူတွေဟာ နာမည်ကျော်ကြားသွားတတ်ကြလို့ပါတဲ့။ ဉပမာပြောရမယ်ဆိုရင် Ed Sheeran နဲ့ Shawn Mandes တို့လိုမျိုးပေါ့လို့ မှတ်ချက်ပေးထားကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကိုလဲတွေ့ရပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒီ Reputation tour မှာ သူ့ရဲ့ တိတ်တဆိတ်ချစ်သူကိုရော ပွဲထုတ်တော့မှာလားလို့ ပရိသတ်တွေက မျှော်လင့်နေကြပါတယ်တဲ့…….
ကဲ ယူတို့ရောTaytay ချစ်သူဘယ်သူပါဆိုတာ မသိချင်ကြဘူးလား??? Admin လဲ သိရတာနဲ့ ချက်ချင်းလက်တို့ပေးမယ်နော်…….
Music Newstour news
PREVIOUS POST Previous post: Wanna One အဖွဲ့ဝင်တွေဟာ UNESCO နဲ့ပူးပေါင်းပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက အမျိုးသမီးလေးတွေပညာရေးအတွက် ထောက်ပံ့မှုပေးခဲ့ကြ
NEXT POST Next post: ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး EGOT ၂ ကျော့ပြန်ရရှိသူဖြစ်လာတဲ့ ‘Let It Go’ နဲ့ ‘Remember Me’ သီချင်းတွေရဲ့ဖန်တီးရှင်